Home Wararka Madasha Xisbiyada Qaran oo walaac ka muujiyay ansixinta aan sharciga ahayn ee...
Madasha Xisbiyada Qaran oo walaac ka muujiyay ansixinta aan sharciga ahayn ee Golaha Wasiirada KMG.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa looga hadlay ansixintii golaha wasiirrada Soomaaliya ee dhismaha hey’adda Batroolka iyo xubno cusub oo lagu biiriyey golaha adeega garsoorka.
3. Madashu waxey aad uga walaacsan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay Xukuumadda Xil-Gaarsiintu ku dhaqaaqdey shirkeedii Golaha Wasiirrada ee qabsoomay 30/07/2020 oo ay ku magacaabeen hay’ado Dastuuri ah sida Hay’adda Adeegga Garsoorka iyo Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed.
In Shaqada Xukuumadda Xil-Gaarsiintu ay ku ekaato kaliya socodsiinta hawlaha caadiga ah ee xukuumadda inta reysul wasaare haysta kalsoonida Golaha Shacabka laga soo magacaabayo sida ku xusan Dastuurka Dalka qodobkiisa 103aad.
In Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo ay qaadayso Xukuumadda Xil-Gaarsiintu isla markaana ay kula xisaabtamaan si joogto ah hawlaha ay qabanayaan inta reysal wasaare laga soo magacaabayo.
Halka Hoose ka akhriso war saxaafadeedka Madasha Xisbiyada Qararn